बहराइनमा एकैपटक ९ नेपालीमा कोरोना संक्रमण ! – Sagarmatha Online News Portal
बहराइनमा एकैपटक ९ नेपालीमा कोरोना संक्रमण !
काठमाडौँ । बहराइनमा एकैपटक ९ जना नेपाली कामदार कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)बाट संक्रमित भएका छन् ।
यसअघि बहराइनमा ३ जना नेपालीमा कोरोना देखिएको थियो । बहराइनस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार एउटै क्याम्पमा बसेका कामदारमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो । बहराइनको सल्मावादस्थित एक क्याम्पमा कार्यरत विदेशी कामदारलाई कोरोना देखिएको थियो ।
त्यो क्याम्पमा नेपाली सहित ४ सय जना बस्दै आएका थिए । सबैलाई क्याम्पमै क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो, बहराइनका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले भने, ‘स्वास्थ्य परीक्षणको क्रममा ९ जना नेपालीलाई पोजिटिभ देखिएको हो ।’
उनीहरुको अवस्था स्थिर छ । त्यस क्याम्पमा अझै कति नेपाली छन् भन्ने खुलेको छैन । बहराइनको स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुसार शुक्रबारसम्म १२ नेपाली सहित २ सय ८६ जनाको उपचार भइरहेको छ । ३ सय ८२ जना भने निको भएर अस्पतालबाट घर वा क्याम्प फर्किसकेका छन् ।
हालसम्म बहराईनमा ६ सय ७३ जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । भने, ४ जनाको मृत्यु भैसकेको छ । ३ सय ८८ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । भने, अझै २ सय ८१ जना उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये ३ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
Published On: २२ चैत्र २०७६, शनिबार